FJKM Ankadindramamy Fahazavana » Toriteny Alahady 15 Mey 2016
Joela 3, 1 – 5 ; Jaona 15, 26 – 27 ; Asa 2, 14 – 21
Jaona 15, 26 – 27 no teny raisina andraisana hafatra ho antsika amin`ity andro Pentekosta ahatsiarovana ny nanomezan`ny Tompo ny Fanahy Masina ho an`ny mpianatra fahizay. Andro Pentekosta maneho fa manatanteraka ny Teny izay nolazainy, nampanantenainy ho an`ny mpanaradia Azy ny Tompo.
Raha ity Jaona 15 ity no dinihina dia maro ny fampianarana nataon`i Jesoa Kristy hita eto fa ao anatin`izany ny hoe : hiharan-javatra sarotra ny mpanaradia Azy, hisy fanenjehana, hisy fankahalahana sns…. toa midika fa sarotra ny asa fanompoana apetrany hotohizan`ny mpianatra rehefa lasa Izy. Manoloana izany indrindra no ahitana izao teny fampanantenana sy fanomezantoky hitantsika eto manao hoe : Jaona 15, 26.27. Sarotra ny asa fanompoana miandry noho izany omena, na ampanantenaina ny mpianatra fa tsy miasa irery fa eo ny Fanahy Masina ho mpitarika, hampahery amin`ny andraikitra ho tanterahin`izy ireo. Miseho eto ary ireo tendren`i Jesoa Kristy ho vavolombelony.
1. Ny Fanahy Masina , hirahina ho eo amin`ny mpianatra
2. Ny Mpianatra izay tarihin`ny Fanahy Masina
1. Ny Fanahy Masina, hirahina ho eo amin`ny mpianatra
Hoy ny and.26 eto ….. mazava tsara fa eto fanomezana vao hatolotra ny mpianatra ny Fanahy Masina. Izany hoe mbola tsy manana ny Fanahy Masina ny mpianatra mbola tsy teo anivon`ny mpianatra ny Fanahy Masina fa rehefa lasa i Jesoa Kristy vao ho tonga sy ho azon`ny mpianatra izany Fanahy Masina izany.
Fantantsika tsara tokoa fa ny andro Pentekosta no tanteraka ny fanomezana io fampanantenana miavaka io. Nahoana tokoa moa no nomena ny Fanahy Masina ? Hotondra inona ho an`ny mpianatra io Fanahy Masina io ? Raha ny fanambaran`i Jesoa Kristy eto no dinihina dia mazava tsara. Omena ny mpianatra ny <<Fanahin`ny Fahamarinana>>, ary io Fanahy Masina io no ho VAVOLOMBELONA hanambara an`i Jesoa Kristy.
Inona moa no ataon`ny VAVOLOMBELONA ? : ny asan`ny vavolombelona dia ny fitaomana, ny fanambarana, ny filazana, na fandresen-dahatra ny amin`ny zavatra fantany sy hitany tokony hampahafantarina ny hafa. Lazaina ihany koa fa Fanahin`ny Fahamarinana izy io, midika izany fa Tena vavolombelona marina hampahafantatra amin`ny olona, amin`ny mpanaradia an`i Jesoa Kristy ny TENA MARINA dia ny famonjena vitan`i Jesoa Kristy teo ambony hazo fijaliana. Famonjena azo antoka nataon`Andriamanitra ho an`izao tontolo izao tamin`ny alalan`i Jesoa Kristy Zanany.
Izany hoe ny Fanahy Masina dia tsy mitondra zavatra hafa, na fampianarana hafa, fa izay nataon`i Jesoa Kristy sy efa nolazainy ihany no ambarany, eny ampianarina mba handresen-dahatra ny olona hiaina marina ny famonjena vitan`i Jesoa Kristy.
Izany hoe : miasa ny Fanahy Masina, miasa ao anatin`ny olona mba ahatonga ny olona hitoetra amin`ny famonjena, ahalala sy ho resy ny famonjena nataon`i Jesoa Kristy.
Ry havana malala, mazava araka izany fa tian`Andriamanitra hitoetra marina amin`ny Famonjena vitan`i Jesoa Kristy isika noho izany nomeny ny Fanahy Masina. Manambara marina ny amin`i Jesoa Kristy ny Fanahy Masina. Manambara marina ilay famonjena tena azo antoka vitan`i Jesoa Kristy ny Fanahy Masina.
Mazava araka izany fa eo amin`ny Asa Fitoriana ny Filazantsara ataon`ny Fiangonana dia manana anjara toerana lehibe ny asan`ny Fanahy Masina. Matoa misy olona mandre sy mino ny Filazantsara dia noho ny asan`ny Fanahy Masina, ilay Fanahy Masina milaza ny marina momba an`i Jesoa Kristy ao ampony. Tsy ampy hitaonana olona hino an`i Jesoa Kristy sy handray ny famonjena ny ezaka ataon`ny olombelona mitory ny Filazantsara fa tena ilaina ny fiasan`ny Fanahy Masina. Tsy ny Fiangonana, na ny mpitory ny filazantsara no afaka manova ny fon`ny olona fa ny Fanahy Masina miasa ao anatin`ilay olona mandre sy mandray ny Teny toriana.
Tsarovy fa izany indrindra no mahatonga antsika hivavaka hangataka ny Fanahy Masina mialohan`ny famakiana ny Tenin`Andriamanitra voalahatra isaky ny misy fanompoam-pivavahana tanterahintsika.
Eny ny Fanahy Masina no mitarika ny olona hitoetra amin`ny Tena fahamarinana, mila manana, mila mangataka ny Fanahy Masina mandrakariva isaka mba hitoetra amin`ny fampianarana marina efa nataon`i Jesoa Kristy ho antsika. Tsarovy fa amin`izao vani-potoana izao dia betsaka ireo karazan`olona manao fampianarana, asa fitoriana etsy sy eroa raha tsy manana ny Fanahin`ny Fahamarinana avy amin`Andriamanitra isika dia ho voafitaky ny fampianaran-diso ataon`ilay ratsy.
Zava-dehibe loatra ary ny andro Pentekosta, fotoana anehoan`Andriamanitra ny Fitiavany antsika indray, nomeny ny Fanahin`ny Fahamarinana avy Aminy isika mba hitoetra amin`ny marina dia ao amin`i Jesoa Kristy sy ny Fampianarany ka tsy hivily lalana ho amin`ny lalan-diso mitondra ho amin`ny fahaverezana. Ny olona manana ny Fanahin`ny Fahamarinana ihany no tsy ho diso lalana, jereo anie ny Asa 2, 14 ….
2. Vavolombelon`i JK ny mpianatra tarihin`ny Fanahy Masina :
Hoy ny and.27 …. Mazava izany vavolombelona hanambara an`i Jesoa Kristy ny mpianatra. Rehefa mandray ny Fanahy Masina ny mpianatra, iasan`ny Fanahy Masina dia tonga VAVOLOMBELONA hanambara an`i Jesoa Kristy. Ampahatsiahivina fa fampanantenana nataon`i Jesoa Kristy tamin`ny mpianatra ny fanomezana azy ireo ny Fanahy Masina. Fanahy Masina izay antsoina hoe : Mpampianatra, Mpananatra, Mpanampy, Mpampahery, Mpisolo vava ( Parakleto ), rehefa miasa ao anatin`ny mpianatra ny Fanahy Masina araka ireo toetra sy asany manokana ireo dia feno hery sy fahasahiana hijoro ho vavolombelon`i Jesoa Kristy ny mpianatra. Ny mpianatra izay niara-niaina tamin`i Jesoa Kristy, nanatri-maso ny asa rehetra nataony, mahalala marina ny lalam-pamonjena dia afaka mitaona sy mandresy lahatra ny hafa, hampahafantatra izany famonjena izany.
Izany hoe : na dia eo aza izay voalaza teo amin`ny and.26 hoe ny Fanahy Masina no vavolombelona hanambara an« i Jesoa Kristy, miasa ao ampon`ny olona manambara ny marina ny Fanahy Masina. Ity and.27 ity indray dia maneho fa ny vavan`ny mpianatra, ny feo entin`ny mpianatra manambara amin`i Jesoa kristy manazava ny Tenin`Andriamanitra voasoratra dia tena zava-dehibe. Koa ny mpianatra manana, iasan`ny Fanahy Masina dia manana fahasahiana hitory, hilaza ny marina momba an`i Jesoa Kristy ho ren`ny olona tokony handre izany filazana ny famonjena vitan`i Jesoa Kristy izany.
Hitantsika amin`ny teny voalahatra eto izany. Rehefa tonga ny andro Pentekosta araka ny Asa 2, nandray ny Fanahy Masina ny mpianatra dia nanambara tamim-pahasahiana ny asa lehibe notanterahin`Andriamanitra tamin`alalan`i Jesoa Kristy, jereo anie ireto and ireto … and.4, 11, 14, 22…. Feno ny Fanahy Masina ny mpianatra ka nijoro marina tokoa ho vavolombelon`i Jesoa Kristy, afaka nanitsy ny fisainana sy ny fiheverana diso namatotra ny olona. Eny afaka nilaza ny asa lehibe nataon`Andriamanitra ho an`izao tontolo izao.
Mazava araka izany fa rehefa miasa ny Fanahy Masina, mitarika sy mampahery ny mpianatra, ny mpanaradia an`i Jesoa Kristy dia afaka mijoro ho vavolombelona hanambara marina an`i Jesoa Kristy izy ireo.
Ry havana malala, tsarovy fa mila olona hijoro ho vavolombelona, hanambara ny asany ety amin`izao tontolo izao tokoa i Jesoa Kristy. Efa niantso sy nifidy ny mpianatra Izy. Nefa koa tsy ireo mpianatra fahizay ihany fa isika fiangonana Kristiana ankehitriny ihany koa no novolavolainy ho vavolombelony, haneho, hanambara ny asa, hampahafantatra amin`izao tontolo izao ny famonjena efa natao.
Tsarovana amin`ity andro Pentekosta ity fa efa nomena ny Fanahy Masina. Nomena ny Fiangonana, ny mpanaradia an`i Jesoa Kristy ny Fanahy Masina. Afaka mijoro ho vavolombelo tokoa va isika ? Mazava ny voalaza ao amin`i Joela 3, 1 – 5 rehefa mandray ny Fanahin`Andriamanitra ny olona na iza izy na iza dia lasa maminany ( manao asa faminaniana ) izany hoe : mitory ny Tenin`Andriamanitra izany, milaza ny hafatr`Andriamanitra miainga avy amin`ny Teniny izany.
Raha ny fiainan`ireo mpianatr`i Jesoa Kristy no dinihina dia tena nahajoro ho tena vavolombelona mahatoky tokoa izy ireo, jereo kely anie ny voalaza ao amin`ny 1 Jaona 1, 2.3 ….. Meteza ary ianao ho tena vavolombelon`i Jesoa Kristy marina tokoa. Amin`ny asa ataonao an-davan`andro, amin`ny sehetra rehetra isehoanao dia aseho fa manana ny Fanahy Masina ianao ka tena vavolombelon`i Jesoa Kristy marina tokoa. Amena.